Espaina: An’arivony Manao Diabe Manohitra Ny Herisetra Atao Noho Ny Fasahamihafàn’ny Lahy sy Vavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2015 11:49 GMT
Tamin'ny faran'ny herinandro teo, nameno ny arabe afovoan-tanànan'i Madrid indray ireo olona, tamin'ity indray mitoraka ity, nasehony ny fanoherana ny herisetra ata noho ny maha-lahy na vavy. Ao anatin'ny hetsika mitondra ny anarana hoe “7N” (sarinteny iray entina hilazana ny fihetsiketsehana ny 7 Novambra), amin'ny ankapobeny olona eo amin'ny 20.000-30.000 eo ho eo, avy amin'ny Espaina manontolo no niara-nirohotra nameno an'i Madrid afovoany mba hiampanga ny herisetra atao noho ny maha-lahy na vavy sady hangataka amin'ny fanjakana mba hanao laharam-pahamehana ilay olana. Na eo aza ireo lalàna Espaniôla misy, manohitra ny herisetra hita ao antokantrano ireo karazana fikambanana, sahala amin'ny Doctors of the World, manakilasy ireo fepetra fampiharan'ny fanjakana ankehitriny ho tsy ampy.
Ny tena hafatra nentin'ireo mpanao fihetsiketsehana dia miantoraka amin'ireo antoko politikan'ny firenena, mangataka asa maika manohitra ireo famonoana vokatry ny herisetran-dehilahy (“violencia machista”). Nahitàna fanararaotana ireo olona miaraka amin'ny tena, ankizy ary ireo olona nanova taovam-pananahana io andiana herisetra io, ary noheverina ho namoizana ain'olona maherin'ny 1300 tao Espaina, nandritra ny 20 taona farany teo, araka ny voalazan'ireo mpanohitra. Ny taona 2015 monja, nahitàna vono olona maherin'ny 80 tamin'io tranga io – 41 tamin'io no nanjo ireo vehivavy noho ny nataon'ny vadiny na ny sakaizany, araka ny feminicidio.net, tranonkala iray izay manome fahafahana mijery sy manangona tahirin-kevitra mikasika ny herisetran-dehilahy ao Espaina. Tao anaty hafatra ho an'ireo mpamaky, nanantitrantitra ny hitahirizana ny fahatsiarovana ireo izay maty novonoina ny Feminicidio.